November 10, 2018 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,TAAJJABBII
GABAASA OROMIYAA: DHIMMA MAANGUDDOOWWAN JAARSUMMAAFI ERGAMANII; WBO/ABO FI OPDO, November 1, 2018
Kutaa kana keessaatti qabxii gabaasaa maanguddoowwan Oromomoo, hayyoonniifi Bakka buutonni hawaasaa dhimmi #WBO/ABOfi shira mootummaa #OPDO tiin durfamuu gabaabinaan lafa kaa’ameera. Adeemsi ture nagana kan xumurame ta’ullee gabaasota bakkeen sadan kanaarraa waan hedduun xiinxaluun nidanda’ama. Xiinxalli dhaamsaa uummata dubbisaa jiru kanaaf dhiifameera.
Naqamtee: Qabxiilee jaarsa biyyaan ka’an: Uummatni Oromoo sababni itti Harargee fi Wallaggaarraa buqqfamaa jiruuf Oromoon qawwee dhabuu dha. Mootummaan Oromiyaa malee Oromoo hin barbadu Ummattoonni Afar, Somalee ,Beneshaangul, Amaraa, Tigraay amma funyaaniitti hidhataa jiru;Oromoo hiiikkachiisuuf maaliif addatti jarjarama? Mootummaa fi ABO araaramaniiru nuun jettan.Amma maaltu dhalannaan waraana nurratti labsu?Simannaa finfinnee gaabbanii? Buqqaanees waraana nutti guuran.Nuti waraana mootummaa hin barbaadnu;hatattamaan waraana nurraa kaasaa. Somaaleen hidhatee Oromoo cabse; mootummaan ija tokkoon nu hin ilaalu. Somaaleen Oromoo hanga kana yoo buqqisu mootummaan eessa jira?Beneshangul Oromoo ajjeesuu bira darbee maasiirratti midhaan gubaa jiru.Oromoo du’arraa hafes beelaan adabuuf sagantaan socho’aa jiru. Maaliif hin hidhannu?Diina nutti dhufu maaliif ofirraa hin deebisnu?Hidhannee of irraa faccisuu qabna. Nagaan haa bu’u garuu harka qullaa homaa gochuu hin dandeenyu. Namoota Oromoo irratti yakka raawwachaa turan warra akka Kamal Galchuu, Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaa maaliif nurratti muddu? WBO toorban lamatti barbadeessina jettaniittu.Lolli kana booda kan WBO fi mootummaa gidduutti qofa gaggeeffamu otoo hin taane lola uummataa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamu ta’uu deemaatii Lammaatti nuuf himaa. Dura lafarraa nu fixxanii WBO tti dabartu jedhaa itti nuuf himaa. ABOn dhiiga Oromoon dhaabbate.OPDOn garuu yoo xiqqaate wallaalaadha jennee ibsuu dandeenya. Seenaa darbe dubbisaa akkatti Oromoo cabsan ( Minilik irraa hanga Mallas);ilmaan bofaa bofuma. Mqllaqni Oromoo hin ta’u; mallaqaa fi qabeenyaan yeroo itti Oromoo gowwoomsitan darbee jira.Dhugaa fi haqa qofa barbaadna. Durba sossobanii dubartii godhu; nu sossobdanii WBO hiikkachiisuu dhuftanii? Kun yoomuu isinii hin milkaahu. Yeroo mootummaa ceehumsaa Mallasfaa Arbaa guugguutti ofii yakka raawwattanii nutti haqatani.Kana booda maqaa WBO n yakka hojjettanii lammata nu hin gowwoomsitani. Araarra hin jibbinu; garuu waa’ee WBO hiikkachiisuu akka nutti kaaftan hin barbaadnu. Qabxiilee Qeerroo fi Qarreen ka’an: (bakka buutuu qeerroo) WBO n poolisa Oromiyaa warra qawwee tokkoo fi ulee sagaliin socho’anitti akka dabalamu hin barbaadnu. Jijjiiramni qabatamaan dhufe hin jiru; ammas hidhamaa, reebamaa fi ajjeefamaa jirra.ABO hiikkatu hin qabnu jedhe uummatni oromoo jedhaatii warra biyya bulchaa jirutti nuuf himaa; lama hin gowwoomnu; hiikkatanii loluun jiraa? Mootummaan weerara Gumuz nurratti raawwachaa jirtu nurraa dhaabsisuu maaliif dadhabe?Gochaa Gumuz keessaa mootummaan harka qabaa laata jennee shakkaa jirra. Nuti ABO dha malee diina miti.Maaliif akka diinaatti ilaalamna?Maaliif humna waraanaa guddaa nutti bobbaaftu?Eenyurratti waraana keessan bobbaasaa jirtu? ABO fi Dawud yoo dadhaban nuti itti dabarree lolla;qeerroon duraanuu lolaa ture; yoo dadhabdan itti dabarree lolla. Jaarsa biyyaa: Ani nama waggaa 82 ti; dhiyeenya kana nahiikkachiisanii jiru. Gantummatu baay’ate.Dhimma weerara gumuz n walqabatee shamarran Oromoo tokko nama 11n gudeedamte jirti? Biyya mootummaan keessa jirutti yakki akkasii raawwatamuu qabaa?Attamiin mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira jennee dubbannaree? Isa durii caalaa balaaf saaxilamne. Hidhataan ABO namni 5 naannoo tokkotti yoo mul’ate taankii fi matireyyesiin nutti duultani; gumuz yoo Oromoo lafarraa haxooftu waraanni keessan eessa jira? Warri nuti mootummaa Oromooti; ijoollee keenya jennu tooftuma Mallasiin nutti ka’ani. Qeerroo: WBO n bilisummaamaa keenya mirkaneessuuf ijaarame. WBO n poolisa ta’uuf miti kan uumame.Warra mootummaatti WBOn isiniifuu wabiidha jedhaa itti nuuf himaa.Fonqolcha mootummaa irratti dhiyeenya kana otoo arginuu attamitti WBO n akka hiikkatu hayyamnaree?Amaarri meeshaa hidhatee hiriira nagaa bahaa jira.Addatti maaltu uumamnaan Oromoon akka qawwee hiikkatu barbaada mootummaan kun?Hin bilisoomne nuti; karaarra jirra!Yoo dandeenye dabalataan hidhachuu malee qawwee hiikkannu hin qabnu jedhaniiru jedhaatii itti nuuf himaa. Nuti mootummaa yaadasaa nurratti fe’u hin barbaadnu; nutti hin fe’iina! Aktivistootni OPDOn nurratti bobbaasee jiru hatattamaan akka nurra dhaabbatan itti nuuf himaa. Naannoo WBO keessa socho’aa jirutti maaliif kaampiin waraanaa gurguddaan ijaarama? Nutu polisnu nu gaha waan ta’eef waraana keessan nurraa kaasaa.Kaampii waraanaa nurratti hin ijaariinaa. Nuti ABO-WBO jechaa guddanne ; WBO tti hin bu’iinaa jedhaniiru qeerroo fi qarreen Naqqamtee jedhaatii warra mootummaatti nuuf hima.Bilisummaa keenyaatti gufuu ta’a taanaan abbaan barbaade boolla haagalu.Yoo waraana nurraa baasaan qofa nagaan waliin jiraanna.
Gimbii: Jaarsa biyyaa: Oromoon bakka hundaatti buqqa’aa fi ajjeefamaa jira.Kun edda OPDO n aangootti dhuftee daran babal’achaa jira. Dhiigni Oromoo jiguun dhaabbatuu qaba. Dhaama malee maaliif hanna bifa fakkaatuun maaliif nutti dhuftanii? Rakkoon WBO waliin walqabatee ka’aa jiru guutummaa Oromiyaa ilaallata. Maaliif addatti Lixa Oromiyaarratti fuulleffattani? Mootummaan waraana nutti bobbaase nuuf gadduuf akka hin dhufne ni hubanna.Kaleessa ABO waliin karaa nagaa waliin hojjenna jedhame.Har’a Waan haaraan maaltu uumame kan dubbee waraanaa nutti dhaanani?Waliigaltee kan diigaa jiru eenyu jettanii qabattanii as dhuftan?Dubbiin obbo Lammaa bira jirti.Maaliif uummata nagaarratti waraana labsu? Aktivistoonni OPDO maaliif ololaan tasgabbii biyya diigu?Wbo n kaayyoo saba Oromoo bilisoomsuuf dhaabbate; mindaa ykn faayidaaf mitqarreei. WBO waliin dhumna.Maaliif nutti duultu jedhaatii ol deebi’aa mootummaatti himaa. Qeerroo fi qarree: Gaaffiin bu’uraa uummatni keenyi , qeerroo fi qarreen waggootii 27 darban wareegama itti baasaa tureefii maali? Bilisummaa guutuu argachuufi. Dhaabni gaaffiin bu’uraa kun akka deebbii argatu nu waliin qabsaahe eenyu? ABO dha.Mootummaan yoomuu kana dagachuu hin qabu. Waraanatu nurratti gaggeeffamaa jira.ABO waliin turre; wajjin dhiigne; maqaa ABO tiin maatiin keenyi itti diigame.Ammas kan Oromoof hojjetu ABO dha jennee amanna. ABO n -WBO n hin jiru taanaan nutis hin jirru; kana nuuf beekaa.WBO kan hidhachiise uummata Oromoo ti; WBO n hin hiikkatu gara kutadhaa jedhaatii warra mootummaatti nuuf himaa.Buqqaafamuu uummata Oromoo maaliif hin dhorkine mootummaan biyya bulchu?Mootummaan WBO jibbu attamitti Oromoo jaallata?Mootummaan WBO jibbu attamitti mootummaa Oromoo ta’a?Waggaa 27 booda dhiiga keenyaan cunqursaa of irraa buqqaafnee xiqqumallee otoo hin boqatiin maaliif gara lolaatti nu deebisuuf jarjaru?WBO n OPDO f utubaadha malee diina ta’uu hin dandahu.Oromoon OPDO f barcuma yeroof irra teessu qofaa itti kenne; Oromoo n ABO lolaatii, hadamsaatii aangoorra turaa hin jenne.Aangoo keessaniif jettanii bilisummaa keenya hin nyaatiinaa jedha uummatni oromoo jedhaatii itti nuuf himaa warra biyya bulchaa jiru.Lolli kun kan ABO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamu qofa otoo hin taane kan ummataa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamu ta’a.Meeshaa hammayyaa qabna jettanii nu hin doorsisiinaa.Bara Hayilesilaasee fi dargii warri biyya bulchaa turan oromoo dha.Har’as abiy waan biyya bulcheef bilisummaa keenya dabarsinee hin kenninu.Warri mataarra ta’anii biyya bulchaa jiran uummataaf yoo hin quuqamne isaanirratti qabsaahuu ittiuma fufna.Maaliif Oromiyaa dirree ajjeechaa godhu?Madaa keenyarratti madaa dabala jirtu jedhaa itti nuuf himaa.Waraana dargii caalaa uummata siivilii kan ajjeesuu waraana ihadigi dha.Maal mootummaa Oromoo ti hojiin isaaniiwoo wayyaanee waliin tokkuma.Dhugaatti mootummaa Oromooti yoo ta’e waggootii 27 guutuu isa nu fixaa ture hiikkachiisee WBO haa hidhachiisu.Jaarsoleen kun nu daboomsuuf dhuftan taanaan gonkumaa gorsa keessan hin fudhannu.Aangoo kana nutu isinitti kenne, nudhiisaa jedhaatii itti nuuf himaa.
Dambidoolloo: Jaarsa biyyaa: Roorroon baayee nutti guddate;mootummaan biyya gaggeessu roorroo nurraa dhowwwuu hin dabeenye. Kaleessas hiikkachaa turre; har’as hiikkadhaa jettu. Oromoon hiikkachuuf qofa uumamee? Uummatatu WBO hidhachiise; qawwee hiikkannu hin qabnu jedhaatii warra isin ergetti deemaa nuuf himaa! Yoo OPDO fi ABO n walitti baqanii waliin biyya bulchani nutti tola.ABO taphaa ala taasisuuf shira hojjetamu garuu jabeessinee dura dhaabbanna.Maaliif namoota farreen ABO ta’aa kan akka Kamal,Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaa nurratti muddu? Gochaaleen akkasii ABO fi OPDO walitti dhiyeessuu? Faallaa walii hojjechaa attamitti walamantaa ijaaruu dandeenya? ABO f simannaa goonee otoo hin xumuriin maaliif gadda keessa nu galchuuf ariifattu?Akka qabatamaan naannoo WBOn keessa socho’u keessatti arginutti olaantummaan seeraa fi namusni sadarkaa guddaatti kabajamaa jira.WBOn warra yakka hojjetee mootummaa waliin hojjetee seeratti dhiyeessaa turani. Baankiin akka hin saamamne WBO tu tiksaa jira.Maaliif WBO tti waraana duulchisuun barbaachise? Biyya tokko keessa humni lama jiraachuu hin qabuu inni jedhamu saayinsiidha. WBO n hiikkachuu hin qabu inni jedhus saayinsii dha. Mootummaan saayinsii lamaan kana akkaataa itti walitti araarsu irratti haa hojjetu.Gabaa deemnee killee tortoraa tokkoo fi killee nagaa tokko bitannee yoo galle killee lama qabna jechuu ni dandeenya.Garuu tortoraan sun waan faayidaa hin qabaanneef Killeen itti gargaaramuu dandeenyu tokkuma.Yaadni WBO humna poolisa oromiyaatti dabaluu jedhu akkuma dubbii killee kanaa tortoraa fi nagaa walitti makuu ta’a.Oromoon madam qabna; lama nu hin suufani jenna. Mootummaa Oromoo jennee isa yaadnu hidhatee fonqolcha mootummaa irratti gaggeessuuf kan itti duule Makalakeyaadha malee WBO miti.Kan hanga funyaaniitti hidhatee uummata Oromoo goolaa jiru makalaakeyaadha malee WBO miti. WBO n humna nagaa fi bilisummaa ti.Warri makalaakeyaa saba nagaa maaliif ajjeesuu? Yoo akkasii mootummaa kana isa duraarraa maaltu adda isa godhe?Makalaakeyaan har’as ABO deeggartan jedhanii qabeenya uummataa barbadeessu( suuqii,mootora,konkolaataa hedduu barbadeessanii jiru.) Loon, harreen,hoolitnii fi re’oonni otoo hin hafne rasaasa makalaakeyaatiin tumamanii jiru.Kaleessa ABO n seera qabeessa; araarri bu’e jedhame. Har’a labsii malee maaliif nu dararu ; yookaan dursaatii ABO n seera ala jedhaatii labsaa. Kaadiroita mootummaa fb n olola nurratti gadhiisan nurraa dhaabaa jedheera ummatni jedhaatii itti nuuf himaa. WBO dhiisaatii dursitanii hoogganoota TPLF warra wagga 27 guutuu yakka nurratti raawwachaa turanii fi har’as mootummaa keessa ta’anii makalaakeyaa nurratti duulchisaa jiran hiikkachiisaa jedha uumatni Oromoo jedhaatii itti nuuf himaa Dr Abiy fi Lammaatti.Dadhabbii isaanii ni kabajna ;isaan jaalanna ture; garuu dubbiin deebi’ee isaan harkatti akka badaa jiru itti nuuf himaa. Caasaan makalaakeyaa fi tikaa mootummaa ammas madaalawaa miti. Gaafa cinqiin dhuftu abbootii Gadaa fi amantii nutti bobbaasuun baramee jira. Mootummaan jaarsolee kana ni dhagahaa laata?yaada keessan ni kabajaa?Kanarratti ammas shakkii guddaa qabna. Aariin Oromoo otoo walitti qabne nuclear Amerikaan Jaappan irratti buufte caalaa humna qaba jedhaatii itti nuuf himaa mootummaatti.Irra deddeebinee isinitti himanna: WBO n nagaa hin booressu; warra makalaakeyaa nagaa keenya booressaa jiran nurraa kaasaa. Qawwee fi dimokraasiin akka waliin hin deemne ni beekna. Hiriira siyaasaa itiyoophiyaa (biyya huruu qawweetiin walitti dhufte) yoo ilaalluu fi waan qabatamaan lafarratti argaa jirru caalmaatti hidhachuu akka qabnu nutti mul’isa.Lammaa fi Abiy orma gammachiisuuf isa Oromoo dallansiisiiftan dhaabuu qofatu isin baasa jedhaa itti nuuf himaa.Dhimmaa finfinnee attam gootani jedhaatii nuuf gaafadha.Saba gowwomsuun ulfataa dha.Dr Abiy fi Lammmaan Wayyaanummaan isaanii dhibbaa dhibbatti isaan hin dhiifne ammallee.Mana keenya sirreeffachuutu dursa jedhaa itti nuuf himaa. Itiyoohummaan oromoodhaaf summii dha malee suusii miti. Dhimmi lixa Oromiyaatti deemaa jiru kun dhimma WBO fi mootummaa qofa miti.Dhimma uummata Oromoo maraa ti.Lamaa fi abiy Oromoo lafarraa duguuganii eenyuun bulchu? Dhiyeenyuma kana naannoo Qeebbeetti Oromoo 20 ol tu waraana mootummaan ajjeefame.WBOn saba kana mana gabrummaarratii baasuufi falmachaa jira; WBOn naannoo keessa socho’u keessatti alseerummaa balleessaa jira. Geetaachoo Asaffaatu WBO hidhachiisaa jira jettanii olola sobaa oofuurra warrant itti baastanii Geetacho asaffaa maaliif tohannoo jala hin oolchine? WBO n warra mana hidhaa cabsee bade qabee polisatti kennaa jira. Warri dubartii ulfaa ajjeesisanii fi dhiiga of harka qabani dursanii haa hiikkatan jenna. OPDO n WBO hiikkachiisuuf abjachuurra dursitee geetaachoo asaffaa seeratti haa dhiyeessitu.WBO hiikkachiisuu hawwuurra dursanii mootummaa gaggeessaa jiran haa qulqulleeffatani. Oromoon lafaa fi uummata saamamnee jirra( dirree Dawa,walloo fi gojjam) jedhaatii itti himaa Lammaatiin. Dubbiin ijoo onnee keenya qabattee jirtu tokko:WBO
Dubbiin ijoo onnee keenya qabattee jirtu tokko:WBO n rukutame jechuun lammaa fi abiyyiiif qaaniidha.seenaa xurii akkasii hin galmeessisiinaa.Eenyutu du’ee eenyutu jiraata?Hunde bilisummaa oromoo eenyutu fide? ABO dha.Uummatni Kun WBO waliin dhumuuf akka qophaawee jiru itti nuuf himaa. Qeerroo: Saba bilisummaa eebote bilisummaa hatuuf dhuftanii laata jennee isin shakkine jaarsuma kanayyuu. Yoo jaarsa dhugaa taatan qeerroon Wiirtuu Dammaqsaa jedhamu asuma dambidolo keessatti makalaakeyaan ukkaanfamee edda hidhame toorban lama.Nuuf hiiksisuu dandeessuu? Namoota guyyuma walfakkaataatti gidaamiitti ajjeefaman: 1.Umar isaa 2.Mazgabuu reeba saanjaatiin tumanii ajjeesaan 3.Nasrallaa taddasaa 4.Fayyisaa obbaa 5.Eebbisaa raggaasaa 6.Biqilaa zaruu 7.Obboleessa ebisa ( kan madaahe) 8.Bushee tattafaa Makalaakeyaan kun ittisa biyyaa miti ;uummatni naannoo kanaa makalaakeyaa itiyoophiyaa ittisa wayyaaneeti jennee amanna.Waraana yakka ulfaataa nurratti raawwataa jiru kana hatattamaan nurraa haa kaasan.
Qulloo Busa: Do the Ethiopian People know what’s going on in/around Ministry of Education?~Very Sensitive issue